> Resource > iPad > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Broken / Dead iPad
Fursada inuu ka soo kabsado xogta ka jabay iPad
Waa arrin niyad-jab marka aad iPad (macruufka 9 ka mid ah) ay ku socdaan si xun ugu jabtay ama noqdo dhintay. Tan iyo iPad ah lama hagaajin karo, xogta ka badbaadiyo noqdo deg-deg ah. Dad badan ayaa la ogaado oo kaliya in ay ka gurmad Lugood soo celin karaa xogta iPad la qalab kale macruufka haddii ay jirto. Dhab ahaantii, waxaa weli jira siyaabo kale.
Sida aan ognahay, Lugood gurmad aad iPad aan la daawan karaa ama heli. Haddii aad rabto in aad badbaadin xogta iPad on your computer, dhab ahaantii, waxaad isticmaali kartaa qalab cid saddexaad soo saaro gurmad Lugood iyo aad u hesho dhammaan macluumaadka ka soo baxay waxaa ka mid ah. Tani waa sida ugu horeysay, ku tiirsan aad gurmad Lugood. Maxaa dhacaya haddii aadan haysan gurmad Lugood ah? Sidoo kale, waxaad isticmaali kartaa qalab kale oo si toos ah baarista dhintay iPad u soo kabashada xogta. Sidaa darteed, waxaa macquul ah waa mid aad u ballaaran.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta laga jebiyey, dhintay iPad
Currently, labada users Mac iyo dadka isticmaala Windows isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) si ay u soo ceshano xogta aad ka jabay iPad ay soo saarida xogta Lugood gurmad file ama ecover si toos ah uga jabay iPad (9 macruufka la heli karo).
Halkan aynu qaadan Wondershare Dr.Fone ah tusaale ahaan. Haddii aad tahay qof user Mac ah, halkan ka tagtaan, oo Ladnaansho xogta iPad tirtiray .
Tallaabada 1. Isku aad jabay iPad in computer
Orod Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, markaas xiriiriyaan jabay iPad in computer. Marka waxa la ogaado, waxaad heli doontaa interface sida soo socota. Waxaa jira laba hababka soo kabashada: kabsado Device macruufka, oo ka soo kabsado Lugood ee kaabta File. Isku day mid ka mid ah horeysay soo socda.
Wixii iPad la isha bandhigay, mini iPad, iPad cusub iyo iPad 2 iyo kuwa cusub (soo kabsado xiriirada, fariimaha, qoraalada, soo wac taariikhda, jadwalka taariikhda, xusuusinta iyo Bookmarks Safari):
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone ee macruufka si buuxda u la jaan qaada iPad wax socda ee macruufka 9 hadda!
Wixii iPad 1 (kabsado kitaabkii duudduubnaa camera, il sawir, maktabadda sawir, xiriirada, fariimaha, qoraalada, soo wac taariikhda, jadwalka taariikhda, xusuusinta, cadaymaha cod, iyo Bookmarks Safari): Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka siib-in marka hore.
Tallaabada 2. Sawirka aad ka jabay iPad
Hadda, riix Start Scan si toos ah baarista iPad haddii laga garan karaa software ah. Haddii aad isticmaasho iPad 1, aad u baahan tahay si ay u raac talaabooyinka soo bandhigay in interface ee kor ku xusan inay soo galaan hab iskaanka qalab ee:
Hay iPad, oo guji badhanka Start.
Marka aad u sheegay in aad si guul leh ku soo gashay hab DFU ah, kaa fasaxi kara Home oo ay bilaabaan aad ka baareyso iPad sida soo socota.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha & badbaadin iPad (macruufka 9) xogta on your computer
Scan ka dib, waxaad ku eegaan karo xogta oo dhan on your iPad. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Macluumaadka halkan helay waxaa ka mid ah waxa aad leedahay aad iPad hadda iyo kuwii idinka tirtiray ka hor. Waxaad durki karaa badhanka on sare ee suuqa kala waxyaabaha bandhigay tirtiray kaliya.